Ankara ဘူတာတွင်အပြာရောင်လည်စည်း - RayHaber
[30 / 10 / 2019] Bursa ရဲ့အဆုံးမဲ့ရထားစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ပြtheနာလား။	16 Bursa
[30 / 10 / 2019]3Multi-storey Istanbul ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏တင်ဒါသည် 2020 တွင်ရှိသည်။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[30 / 10 / 2019] Bursa ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစျေးနှုန်းများသည်2နှစ်များအတွက်တူညီသောအဆင့်တွင်ရှိသည်	16 Bursa
[30 / 10 / 2019] Sabiha GökçenTavşantepe Metro Line ဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲ။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[30 / 10 / 2019] Samsun Tram Times နှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ	55 Samsun
[30 / 10 / 2019] Eskişehirအတွက်အလွန်အရေးကြီးသော YHT ဖွံ့ဖြိုးမှု!	26 Eskisehir
[30 / 10 / 2019] ORBEL သည်ကျောင်းသားများအတွက်စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချပေးခဲ့သည်။	52 ကြည်းတပ်
[30 / 10 / 2019] Bursa သည် UR-GE စီမံကိန်းများနှင့်အတူပို့ကုန်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်သည်	16 Bursa
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအပြာရောင်လည်စည်း Ankara ဘူတာတွင်ဝတ်ဆင်
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တပ်ဆင် ankara garina အပြာလည်စည်း
17-20 အောက်တိုဘာလမှအောက်တိုဘာလအထိကျင်းပမည့်အပြာရောင် Tie စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်အသိပညာတိုးပွားစေရန်ရောဂါ၏သင်္ကေတဖြစ်သောblueရာမအပြာချိတ်ဆက်မှုသည် Ankara ၏သမိုင်းဝင် Ankara ဘူတာမှချိတ်ဆွဲထားသည်။
အခမ်းအနားတွင်တူရကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်ဆာပညာရပ်အသင်း ၀ င်နှင့်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်ဆာဌာနပါမောက္ခ Hacettepe တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ဒေါက်တာ Mustafa Erman၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ကုသမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအားဤလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးခဲ့သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြီးတွင်အပြာရောင်လည်စည်းစီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်း၊ အပြာရောင်ဆက်သွယ်မှုကို Ankara မီးရထားဘူတာတွင်ခရီးသည်များအားဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဆီးကြိတ်ကင်ဆာနှင့်၎င်းကုသမှုအကြောင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။
Ilgaz တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ် skis အသင်း 20 / 01 / 2015 Ankara Metropolitan Municipality နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့သည်အဖွဲ့သည် Ilgaz တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Ankara Metropolitan Municipality နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့သည် Ilgaz Yildiztepe နှင်းလျှောစီးစင်တာတွင်ကြိုတင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။ Yıldıztepe Armar ဟိုတယ်၌တည်းခိုသောအားကစားသမားများသည်နံနက်နှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြစ်မည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရေးအဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်အူမြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Kit TÜDEMSAŞဝယ်ယူပါလိမ့်မည် Draw (နူးညံ့ဖျက်သိမ်းခြင်းခြီဆောငျ) 12 / 12 / 2012 Draw ရေးအဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်အူမြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Kit တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကိုဝယ်ပါဦးမည် (TUDEMSAS) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 2012 / 163860 1 - က) စာချုပ်ဝင်အဖွဲ့အစည်း၏လိပ်စာ - KADI BURHANETTIN MAH ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရေးအဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်အူမြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Kit ကိုခပ်TÜDEMSAŞဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 15 / 11 / 2012 Draw ရေးအဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်အူမြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Kit တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကိုဝယ်ပါဦးမည် (TUDEMSAS) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 2012 / 163860 1 - က) စာချုပ်ဝင်အဖွဲ့အစည်း၏လိပ်စာ - KADI BURHANETTIN MAH ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လက်ဝါးကပ်တိုင်ကတ်ကြေးကတ်ကြေးရေးအဖွဲ့ရိုးရှင်းသောအဖွဲ့နှင့် Buy ပါလိမ့်မယ် 30 / 04 / 2019 Cross Shear များနှင့်ရိုးရှင်းသောညှပ်များကိုဝယ်ယူခြင်းတူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်းအထွေထွေ ဦး စီးဌာန (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 1 Cross Shear များအရေအတွက်နှင့် 1 1 /9ရိုးရှင်းသောညှပ်စနစ်များဝယ်ယူခြင်း…
တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဘူတာဘယ်မှာရှိသနည်း အဆိုပါတူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဘူတာကိုရယူပါမှဘယ်လိုနေသလဲ? 30 / 10 / 2016 Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာဘယ်မှာလဲ။ : Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာတွင်ယနေ့ခေတ်ပျံသန်းမှုစတင်ခဲ့သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်ရန် Ankara အရှိန်အမြန်ရထားဘူတာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာရုံ
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ Konya ၏ဘတ်စ်ကားလိုင်းအသစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ Metrobus ယာဉ်အသစ်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ 96 ။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူး
Altınorduမြို့တွင်းဘတ်စ်ကားဂိတ်သည် 80 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပြီးစီးသည်
Overpass Elevators တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောနိုင်ငံသားများအားကယ်တင်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရေးအဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်အူမြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Kit TÜDEMSAŞဝယ်ယူပါလိမ့်မည် Draw (နူးညံ့ဖျက်သိမ်းခြင်းခြီဆောငျ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လက်ဝါးကပ်တိုင်ကတ်ကြေးကတ်ကြေးရေးအဖွဲ့ရိုးရှင်းသောအဖွဲ့နှင့် Buy ပါလိမ့်မယ်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 30 1937 အသစ်ကဘူတာရုံတူရကီဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Gara, 25 နှစ်ပေါင်းများ၏ဗိသုကာ ...
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းအလုပ်ပေါင်းကူးမှ install လုပ်ထားခံခဲ့ရ (ဗီဒီယို)
YHT အဘယ်ကြောင့် Sapancad Takıldı၏တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်း
အဆိုပါလမ်းရထားစီမံကိန်းအားထံမှŞirinyer-Tinaztepe, ဝန်ကြီး Yildirim မက်ထရိုတောင်းဆိုချက်ကိုပူးတွဲခဲ့သည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 26 အောက်တိုဘာ၊ 2016၊ ဆမ်ဆမ်၏ပထမဆုံးဇာတိသည် Bursa တွင်ထုတ်လုပ်သည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (584) စက်တင်ဘာလ 2019 (558) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (860) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Izmir ရထားနာရီနှင့်မြေပုံ 2019
အောက်တိုဘာလအတွင်း Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 29 Kurus